Psalm 142 NLT - Nnwom 142 NA-TWI | Biblica América Latina
Psalm 142 NLT - Nnwom 142 NA-TWI
1Misu frɛ Awurade sɛ ɔmmoa me; mesrɛ no. 2 Meka me nsɛm nyinaa kyerɛ no; meka me haw nyinaa kyerɛ no. 3 Sɛ mereyɛ apa abaw a, onim nea ɛsɛ sɛ meyɛ. Ɔkwan a menam so no m’atamfo asum me firi wɔ so. 4 Sɛ mehwɛ me ho a, minhu ɔboafo biara; ɔbanbɔfo nso nni hɔ. Obiara nso nhwɛ me. 5 Awurade, misu frɛ wo sɛ boa me; wo Awurade, wone me hwɛfo. Wone nea ne ho hia me wɔ m’asetena nyinaa mu.
6 Tie me sufrɛ na boa me efisɛ, m’aba mu abu. Gye me fi m’atamfo nsam efisɛ, wɔyɛ den ma me dodo. 7 Yi m’awerɛhow fi me so na esiane papa a woayɛ me nti, mɛkamfo wo wɔ wo nkurɔfo gua a wɔabɔ mu.
NA-TWI : Nnwom 142